ဝငျကွေး ယူပွီး တိရစ်ဆာနျတှကေို အငတျထားတဲ့ မန်တလေးက တိရစ်ဆာနျရုံ......! - MM Live News
ဝင်ကြေး ယူပြီး တိရစ္ဆာန်တွေကို အငတ်ထားတဲ့ မန္တလေးက တိရစ္ဆာန်ရုံ……!
Bagan Thar September 15, 2019
မန္တလေးတိရိစ္ဆာန်ရုံက သနားစရာ ဝက်ဝံလေးတွေ ဘဝ
ပုံထဲမှာပါတဲ့ အလယ်က ဝက်ဝံလေး (အနီနဲ့ ဝိုင်းထား) က မျက်စိမမြင်ဘူး။ လူလာရင် မတ်တပ်ရပ် လက်လေးနှစ်ဖက်ထုတ်ပြီး အစာတောင်းတယ် လူအသံလေးကိုနားစွင့်တယ် လူအနားမှာရှိမှန်းသိရင် လက်ကလေးနဲ့ကုတ် အစာတောင်းတယ် လှောင်အိမ်အရှေ့မှာ အစာရောင်းတဲ့အသည်ရှိတယ် ငှက်ပျောသီး ၅လုံးတစ်ခြင်းကို ၁၀၀၀ အထဲမှာက လေးငါးကောင် ဘယ်အချိန်သွားသွား အမြဲ ဆာနေကြတယ်။
လူအနားရောက်လာရင် လက်ကလေးတွေထုတ်ပြီး အီအီနဲ့ အော်တယ် အစာကို လုစားကြတယ် ခုနက မျက်စိမမြင်တဲ့ကောင်လေးက အမြဲခံရတယ် အမှန်တော့ သူတို့ အကုန်လုံး အစာဝဝလင်လင် မစားရပါဘူး။ ရှေ့ကအသည်ကို ပုံမှန်ဘာကျွေးလဲ မေးကြည့်တော့ အချိုရည်နဲ့ ထမင်းကို ညနေတစ်ကြိမ်ထဲ အမြဲနယ်ကျွေးတယ်ပြောတာပဲ။
ဘယ်ဝမလဲဗျာ ငှက်ပျောသီး ငါးလုံးတစ်ခြင်းကို တစ်ထောင် ဘယ်သူက ဝအောင်ကျွေးနိုင်မလဲ နောက်တစ်ခုက ပြင်ပ အစားအစာလဲ ကျွေးခွင့်မရှိ သူတို့ကျတော့လဲ ဝလင်အောင်မကျွေး သတ္တဝါလေးတွေကို လှောင်အိမ်ထဲထည့်ပြီး နှိပ်စက်နေကြတာလားဗျာ တိရိစ္ဆာန်ရုံက တာဝန်ရှိသူတွေ ခင်ဗျားတို့ မကျွေးနိုင်လဲ စေတနာရှင်တွေ ကျွေးတာကိုတော့ စီစစ်ပြီးခွင့်ပြုသင့်ပါတယ် ကိုယ်ချင်းစာကြပါဗျာ။
ဒါသတ္တဝါတစ်မျိုးပဲ ရှိသေးတယ်။ တိရိစ္ဆာန်ရုံရောက်ရင် အဲ့လိုတွေမြင်ရင် အမြဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ် နောက်တစ်ခုက သန့်ရှင်းမူ လုံးဝဆိုးတယ် မန္တလေး တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ် တာဝန်ရှိသူတွေ ဝင်ကြေးတွေပဲယူမနေကြနဲ့ တစ်ခုခုလဲလုပ်ပေးကြပါဦး နောက်ထပ် ဆင်တွေ ဆင်သုံးကောင်တွေ့ခဲ့တယ် နံဟောင်နေတာပဲ အနားတောင်ကပ်မရဘူး …..
ဆင်တွေမှာ အရေပြားရောဂါလို အကွက်တွေလဲတွေ့ရတယ် ခြင်တလောင်းလောင်းနဲ့ အရမ်းသနားဖို့ကောင်းတယ် ယုန်တွေဆိုလဲ ညစ်ပါတ်ပြီး အမွှေးတုံးနေတာ အထူးပြောစရာမလိုတောဘူး ကန်စွန်းရွက် အစုတ်အပြတ်ပဲ စားနေရတဲ့ ယုန်နဲ့ ပူးတောင်ငတ်နေကြတာဆို သဘောပေါက်ကြတော့ဗျာ ပြောချင်နေတာကြာပြီ အခုမှကြုံလို့ ဒီစာကို တာဝန်ရှိသူတွေမြင်ကြပါစေဗျာ။ အောင်သက်နောင်
မန်တလေးတိရိစ်ဆာနျရုံက သနားစရာ ဝကျဝံလေးတှေ ဘဝ
ပုံထဲမှာပါတဲ့ အလယျက ဝကျဝံလေး (အနီနဲ့ ဝိုငျးထား) က မကျြစိမမွငျဘူး။ လူလာရငျ မတျတပျရပျ လကျလေးနှဈဖကျထုတျပွီး အစာတောငျးတယျ လူအသံလေးကိုနားစှငျ့တယျ လူအနားမှာရှိမှနျးသိရငျ လကျကလေးနဲ့ကုတျ အစာတောငျးတယျ လှောငျအိမျအရှမှေ့ာ အစာရောငျးတဲ့အသညျရှိတယျ ငှကျပြောသီး ၅လုံးတဈခွငျးကို ၁၀၀၀ အထဲမှာက လေးငါးကောငျ ဘယျအခြိနျသှားသှား အမွဲ ဆာနကွေတယျ။
လူအနားရောကျလာရငျ လကျကလေးတှထေုတျပွီး အီအီနဲ့ အျောတယျ အစာကို လုစားကွတယျ ခုနက မကျြစိမမွငျတဲ့ကောငျလေးက အမွဲခံရတယျ အမှနျတော့ သူတို့ အကုနျလုံး အစာဝဝလငျလငျ မစားရပါဘူး။ ရှကေ့အသညျကို ပုံမှနျဘာကြှေးလဲ မေးကွညျ့တော့ အခြိုရညျနဲ့ ထမငျးကို ညနတေဈကွိမျထဲ အမွဲနယျကြှေးတယျပွောတာပဲ။
ဘယျဝမလဲဗြာ ငှကျပြောသီး ငါးလုံးတဈခွငျးကို တဈထောငျ ဘယျသူက ဝအောငျကြှေးနိုငျမလဲ နောကျတဈခုက ပွငျပ အစားအစာလဲ ကြှေးခှငျ့မရှိ သူတို့ကတြော့လဲ ဝလငျအောငျမကြှေး သတ်တဝါလေးတှကေို လှောငျအိမျထဲထညျ့ပွီး နှိပျစကျနကွေတာလားဗြာ တိရိစ်ဆာနျရုံက တာဝနျရှိသူတှေ ခငျဗြားတို့ မကြှေးနိုငျလဲ စတေနာရှငျတှေ ကြှေးတာကိုတော့ စီစဈပွီးခှငျ့ပွုသငျ့ပါတယျ ကိုယျခငျြးစာကွပါဗြာ။
ဒါသတ်တဝါတဈမြိုးပဲ ရှိသေးတယျ။ တိရိစ်ဆာနျရုံရောကျရငျ အဲ့လိုတှမွေငျရငျ အမွဲစိတျမကောငျးဖွဈရတယျ နောကျတဈခုက သနျ့ရှငျးမူ လုံးဝဆိုးတယျ မန်တလေး တိရိစ်ဆာနျဥယြာဉျ တာဝနျရှိသူတှေ ဝငျကွေးတှပေဲယူမနကွေနဲ့ တဈခုခုလဲလုပျပေးကွပါဦး နောကျထပျ ဆငျတှေ ဆငျသုံးကောငျတှခေဲ့တယျ နံဟောငျနတောပဲ အနားတောငျကပျမရဘူး …..
ဆငျတှမှော အရပွေားရောဂါလို အကှကျတှလေဲတှရေ့တယျ ခွငျတလောငျးလောငျးနဲ့ အရမျးသနားဖို့ကောငျးတယျ ယုနျတှဆေိုလဲ ညဈပါတျပွီး အမှေးတုံးနတော အထူးပွောစရာမလိုတောဘူး ကနျစှနျးရှကျ အစုတျအပွတျပဲ စားနရေတဲ့ ယုနျနဲ့ ပူးတောငျငတျနကွေတာဆို သဘောပေါကျကွတော့ဗြာ ပွောခငျြနတောကွာပွီ အခုမှကွုံလို့ ဒီစာကို တာဝနျရှိသူတှမွေငျကွပါစဗြော။ အောငျသကျနောငျ
ဒီမနကျ လဘ်ကကျရညျဆိုငျက အတှအေ့ကွုံလေး…
ပညာရေးဝနျထမျးမြား လစာတိုးတယျဆိုလို့ ဝမျးသာလှနျးလို့ က တဲ့ ဆရာ အှနျလိုငျးမှာနာမညျကွီးနေ
October 25, 2019 MM Live